Khetha iinyawo ezifanelekileyo kwaye ufumane intuthuzelo | IBezzia
Khetha indawo elungileyo yeenyawo kwaye ufumane intuthuzelo
UMaria vazquez | 19/07/2021 20:00 | Ifenitshala
I-footrest sisiqwenga esingasetyenziswanga, nangona kunjalo, inegalelo kwimpilo yethu, intuthuzelo yethu. Abo kuthi basebenza emakhaya bayazisebenzisa ukulungisa imeko yethu ngelixa sisebenza kwikhompyuter. Kodwa ayizukuba yile yokuhamba ngeenyawo esiza kuthetha ngayo namhlanje, kodwa ezo zisinceda ukuphumla imilenze yethu xa siphumle kwigumbi lethu lokulala okanye kwigumbi lokuhlala.
Izitayile zeenyawo ziba umhlobo omkhulu ngamaxesha okuphumla. Ukusetyenziswa ngokufanelekileyo kusinceda ukuba siphumle imilenze yethu kwaye sikhuthaze ukujikeleza kwethu. Kubalulekile, nangona kunjalo, ukukhetha enye enobude obufanelekileyo kunye nokungatyibiliki ukunqanda iingxaki
Ukuba andikaze ndisebenzise i-footrest, kutheni isenza ngoku? Usenokuba uyazibuza. Kukho abantu ekunokuba yinzuzo kubo ukuhamba ngeenyawo; Abantu abaye bafumana ukonzakala okuthile, banemithambo ye-varicose okanye iingxaki zokuhamba. Kodwa awudingi sizathu sokufuna nikeza ukuphumla kwimida. Ngubani ongathandi ukolula imilenze okwexeshana ...
Ngaba uyayonwabela imovie kumabonwakude?
Ngaba uyayifunda incwadi oyithandayo?
Okanye ngaba uhlala phantsi ukuze uphumle imizuzu eli-10 xa ufika ekhaya?
1 Ungayikhetha njani iinyawo
1.2 Izinto eziphathekayo
Ungayikhetha njani iinyawo
Iinyawo ezinyawo aziyi kukunceda ukhulule iinyawo ezidiniweyo ukuba awufezekisi uninzi lweemeko. Eyona ibaluleke kakhulu, ngaphandle kwamathandabuzo, unakekele ubude bakho ukuze kungabikho mfuneko yokwenza imeko yemilenze. Akufuneki ibe nde kune sofa, soze!
Kuya kufuneka sinyanzele ukuxhaswa ngokufanelekileyo okanye ukuxhaswa kwenkxaso. Kubaluleke ngakumbi kukuyonwabela le padding apho kudlala khona idolo lethu kunye nenkxaso yezithende zethu. Ukongeza, ukuba i-footrest inomdla othile, njengemodeli ze-Omtänksam kunye nePoang ezivela e-Ikea, iyakusinceda ukukhuthaza ukujikeleza.
Ukudibanisa isofa kunye neenyawo ezinyaweni kuzisa ubungangamsha kunye nobuhle kwigumbi lethu lokuhlala. Zombini ezi mpawu sinokuziphucula ngokukhetha iseti yesofa kunye nendawo yokubeka iinyawo ngemigca ecocekileyo kunye nemibala ethambileyo ephendula kolunye lweendlela zokuhombisa ezikhoyo: isitayile saseScandinavia.
Ukuba kwelinye icala sifuna ukubonisa ukungakhathali kunye / okanye ubumnandi bendawo, khetha iziqwenga ezingumahluko kuyilo kunye / okanye umbala ingasinceda siyifumane. Oku kuhlala kusinika uloyiko oluncinci, kodwa ngamanye amaqhosha sinokufikelela kuseto olulungeleleneyo:
Khetha isofa kwiithoni ezingathathi hlangothi kunye nendawo yokubonisa unyawo enemibala yokuqaqambisa kule yokugqibela.
Khetha i-footrest engathathi hlangothi kwaye uyenze ibonakale kuyilo okanye ubume bayo.
Singazifumana zombini iinyawo kunye nokukhukhumeza kwintengiso ezinokuba luncedo ngokulinganayo, kwizixhobo ezahlukeneyo. Eyona idume kakhulu ziimodeli zakudala ezinamakhonkco ezinezembozo ezenziwe ngaphakathi ilaphu, ulusu okanye ulinganiso lwesikhumba. Kukule hlobo lokuhamba ngeenyawo esifumana, rhoqo, ezo zakhiwo ze-ergonomic kunye / okanye ezithandekayo ezinegalelo elikhulu kwintuthuzelo.
Ukongeza, kuya kusiba yinto eqhelekileyo ukufumana iingxowa okanye iifusi zelaphu, ikhonkco okanye iraffia kwii-lounges ngenjongo ezintathu: ukunika imilenze yethu ukuphumla, ukubonelela ngesinye isihlalo kwiindwendwe zethu nokuba sisebenze njengetafile encedisayo ukushiya imagazini esiyifundayo okanye isiselo esilungiselela ukuba naso. Ukuze kuzalisekiswe zonke ezi njongo zintathu, isikhonkwane kufuneka sakhiwe, enokuthi ngeli xesha lenyaniso sinokuthi sibeke esichengeni amandla aso njengeenyawo.
Imathiriyeli ukongeza ekuphembeleleni ubuhle bayo kunye nentuthuzelo ikwachaphazela ukusebenza kwezi ndawo zenyawo. Kwaye kukubagcina njengosuku lokuqala, ezinye ziya kufuna inkathalo ngakumbi kunabanye. Akunjalo lula ukucoca kuyakufana kuyilo lwe-rattan njengoko kunjalo kwilaphu elinye.
Ngaphambi kokukhetha iinyawo, kuyacetyiswa ke zibuze uthotho lwemibuzo ukufumana ukhetho lwethu ngokuchanekileyo. Ubuza njani: Ndizakubeka phi indawo yonyawo? Ngubani oza kuyisebenzisa? Iza kusetyenziselwa ntoni? Ngaba ndiyayidinga ukufezekisa ngaphezulu komsebenzi omnye? Ngaba ibalulekile kum ukuba ukugcinwa kwayo kunye nokucocwa kulula? Phendula bonke abaya kunceda ukutyala imali ngakumbi ekuthengeni isiseko seenyawo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ukuhonjiswa » Ifenitshala » Khetha indawo elungileyo yeenyawo kwaye ufumane intuthuzelo
Indlela yokujongana nokuphazamiseka kwengqondo ngaphakathi kwesi sibini
Izitayile zasehlotyeni: iilokhwe ezinde ezisikwe kancinci